ရေခဲပြင်ထဲမှာပွင့်တဲ့ပန်း _ ခွန်မြလှိုင်: ကောင်းကင် .. ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပြောင်းလဲခြင်း
အခု ဘန်ကောက်စံတော်ချိန် သန်းခေါင်ကျော်.. ခုလေးတင် အပြင်က ပြန်ရောက်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်က ဘန်ကောက်မှာ သာတဲ့လဟာ လိမ္မော်နီရောင်.. ဒါကြောင့်လဲ လရောင်ဖြူဖြူတွေ ရှိတဲ့တခြားမြို့ကို ပြောင်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ဘန်ကောက်ကို စိတ်လက် လေးပင်စွာ ပြန်ရောက်ခဲ့ပြီး တအံ့တသြ ဖြစ်ရတာက ဘန်ကောက်ရဲ့ ကောင်းကင်... လရောင် ဖွေးလွ နေရုံမကဘူး ဘန်ကောက်မှာ အရင်က တခါမှ မမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ ကြယ်ညီလာခံက ဖြိုးဖြိုးဖျောက်ဖျောက်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ်ကနေ လွန်ခဲ့တဲ့ လေးနှစ်အထိ ဘန်ကောက်ဟာ ကြယ်ပျောက် ကောင်းကင် အောက်မှာ အက်ဆစ်မိုးတွေ ရွာချတတ်တဲ့ တိမ်မဲတို့ ကြီးစိုးမှုကြောင့် မွန်းမွန်း ကြပ်ကြပ်။ အပြင်တခါထွက်လို့ အိမ်ပြန်ရောက်ချိန် မျက်လုံးဆေးရည်နဲ့များ ဆေးလိုက်ရင် မျက်လုံးထဲက စက်ဆီငွေ့တွေ ဖုန်တွေက ဆေးရည်ခွက်ထဲမှာ ဝေ့လို့။ ၂မှတ်တိုင်လောက် အကွာအဝေးကို လမ်းလျှောက်ပြီးရင် လူက မွန်းကြပ်မူးနောက်လွန်းလို့ နီးရာ အဲကွန်းတပ် စတိုးဆိုင် ရှော့ပင်းစင်တာထဲ ၀င်နားရတဲ့ အထိ လေထု အခြေအနေ ဆိုးရွားခဲ့တဲ့ ဘန်ကောက်... ခုတော့ ဘန်ကောက်ရဲ့ ကောင်းကင်ကို ဘယ်အကြောင်း တရားတွေက ပြောင်းလဲ ပစ်ခဲ့သလဲ။ သိချင်စိတ်နဲ့ ဘန်ကောက်တမြို့လုံးကိုပတ်ရင်း ကားမောင်း လျှောက်ကြည့်လိုက်တော့ ဘန်ကောက်တမြို့လုံးက စိမ်းစိုလို့။ လမ်းဘေးတွေတလျှောက်မှာ နေရာလွတ် မြေလွတ် မကျန် ရတတ်သမျှ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သစ်ပင်တွေ။ ဘန်ကောက်ရဲ့ နာမည်ကျော် မိုးပျံရထား လမ်းတွေကို ထောက်မ ထားရာ တိုင်လုံးတွေမှာ စီရရီ ချိတ်ဆွဲထားတဲ့ သစ်ပင်အိုး ပန်းအိုးတွေ၊ ဘတ်စ်ကား မှတ်တိုင်တွေမှာ လှလှပပ ထောင်ထားတဲ့ သစ်ပင်စင်တွေ... မြို့လယ်ခေါင် နေရာကောင်းမို့ ရောင်းစား ငှားစား ဘယ်လိုလုပ်ပါစေ အင်မတန် ၀င်ငွေ ရနိုင် တဲ့ နေရာလွတ်တွေမှာလဲ အများပြည်သူ နားနေဖို့ လှလှပပ ပုံစံဖော် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ၀င်ကြေး အခမဲ့ ပြည်သူ့ဥယျာဉ်တွေ .. (ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတော့ အများပြည်သူ အားကစားလေ့ ကျင့်ရာ ဘောလုံးကွင်းတွေကိုပါ မချန် အခွန်လွတ်ဈေးနဲ့ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဖျက် တော့တဲ့ ယာယီဈေးတွေ၊ နေရာကောင်းမှန်သမျှ အသက်ရှူစရာ အောက်ဆီဂျင် ထုတ်ပေးတဲ့ သစ်ပင် စိုက်ဖို့ နေရာမချန်) ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မကသေး။ ညနေစောင်းလို့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု သက်သာပြီ ဆိုတာနဲ့ စတင် လှုပ်ရှား သန့်ရှင်းရေး လုပ်နေတဲ့ စည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေ ဖုန်စုပ်ကားကြီးတွေ အမှိုက်သိမ်းကားတွေ လမ်းနဲ့ သစ်ပင် ရေလောင်းတဲ့ကားတွေ လုပ်ငန်းခွင် ၀င်နေကြတာ မခိုမကပ် တက်တက်ကြွကြွ။ ဘန်ကောက်မြို့တွင်း လမ်းတွေပေါ်မှာတော့ ကားသစ်တွေက အများစု။ ပြီးတော့ ကားအများစုက သဘာဝဓာတ်ငွေ့လောင်စာနဲ့ ဟိုက်ဘရစ် လောင်စာသုံး ကားတွေ ကြီးစိုးနေသည်။ ဒီဇယ်ကားက တွက်ကြည့်ရင် ရာခိုင်နှုံး ခပ်နည်းနည်း။ ဒီတော့ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု ဘယ်လောက် ရှိသည်ဖြစ်စေ ကားတွေက ထွက်တဲ့ အငွေ့တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၈နှစ် လောက်ကလို မဆိုးရွားတော့။ နောက်ဆုံး ကျွန်မ သင်ယူလိုက်တာက ကောင်းကင်ကို ပြုပြင်ဖို့ ကိုယ်တိုင် ကောင်းကင်ပေါ် တက်စရာမလို။ အက်ဆစ်မိုးတွေ ရွာချနေတဲ့ တိမ်ညစ်တို့ကို ကောင်းကင်ကနေ ဆွဲဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ ကောင်းကင်နဲ့ ပတ်သက်စရာ မလို။ မြေပေါ်မှာ နေထိုင်ရင်း ကောင်းကင်ကို ညစ်နွမ်းစေတဲ့ အရာတွေကို ကျွန်မတို့ သုတ်သင် ဖယ်ထုတ်လို့ ရနေတာပါပဲ။ ဒါဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ အနာဂတ်ကောင်းကင် ပေါ်မှာ ဖုံးလွှမ်း အုပ်စိုးနေတဲ့ အက်ဆစ် တိမ်မည်းတွေကို ကျွန်မတို့ရဲ့ ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ ဆိုရင်ရော... နည်းလမ်းတွေကိုတော့ ကျွန်မ စိတ်ဝင်တစား ရှာဖွေနေဆဲ။ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ ကျွန်မရဲ့ ကောင်းကင်ကို ရနိုင်သမျှ နည်းလမ်းပေါင်းစုံကို ရှာပြီး ကျွန်မ ပြုပြင်မယ်ဆိုတဲ့ သန္ဒိဌာန် တရပ်က ခိုင်ခိုင်မာမာ...
Posted by ခွန်မြလှိုင် at 9:29 PM
Nay Lin Ko said...
If you want to change your sky, you have to fly back to your sky first. You have to sacrifice yourself to clean the sky. Otherwise, all are just imaginations.